Xiaomi Mi A3 na-egosi nkọwa mbụ ya | Gam akporosis
A na-edozi nkọwa ndị mbụ nke Xiaomi Mi A3
Izu ole na ole gara aga ka ekpughere ya Xiaomi amaliteworị ịrụ ọrụ na Xiaomi Mi A3. Ọ bụ ọgbọ nke atọ nke ekwentị si na ndị China ka ha wee bịa Android One dị ka sistemụ arụmọrụ. Modeldị ọhụrụ a, ma ọ bụ ụdị, ga-ebupụta na ụlọ ahịa na etiti afọ ma ọ bụ n'oge ọkọchị, ma ọ bụrụ na ha na-agbaso otu ụbọchị dị ka afọ gara aga.
Ha na-amalite iru anyị data mbu banyere Xiaomi Mi A3 ọhụrụ a. Detailsfọdụ nkọwa gbasara ihe anyị nwere ike ịtụ anya na nke a dị ọhụrụ n'etiti akara ndị China. Ya mere lee ihe ụlọ ọrụ kwadebeere anyị na nke a.
Nkọwa mbụ nke enwere izu a banyere Xiaomi Mi A3 bụ na ekwentị ga-enwe a akara mkpisiaka ihe mmetụta wuru na ihuenyo. Nke a bụ ihe anyị na - ahụ ọtụtụ na ahịa gam akporo, ọkachasị na njedebe dị elu. Ma ụdị ndị China ga-abanye iji tinye nke a n'etiti etiti ya.
Ọzọkwa, Ekwuru na ekwentị ga-abịa na igwefoto 32 MP n'ihu. Ọ ga - abụ ihe mmetụta dị ike, nke ị ga - enwe ike iji ekwentị a mara ezigbo mma. Na nkọwapụta nke agbafuola, ekwuru ọkwa. Eleghị anya ika ahụ na-akụ nzọ n'ọdịdị mmiri mmiri, ejiji taa.
Enweghi nkọwa ndị ọzọ banyere nke a Xiaomi Mi A3. Enwere ndị mgbasa ozi na-ekwu maka nhazi nke ihe nlereanya a ga-enwe. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe doro anya. Ebe ụfọdụ na-ekwu maka Snapdragon 675 ebe ndị ọzọ na-ekwu na ọ ga-abụ Snapdragon 710 onye ahotara. Maka ugbu a ọ nweghị ihe anyị kwadoro.
Anyị ka ga-echere ọnwa ole na ole ruo mgbe a ga-ewepụta usoro Xiaomi Mi A3. Ikekwe n'oge ọkọchị dị ka afọ gara aga bụ mgbe anyị nwere nkọwa niile gbasara etiti a. A na-atụ anya na dị ka afọ gara aga, ọ ga-abata na ụdị ọzọ dị mfe. Mana maka ugbu a enweghị ozi gbasara ụdị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A na-edozi nkọwa ndị mbụ nke Xiaomi Mi A3
Bestzọ abụọ kachasị mma iji nyefee foto site na mkpanaka gam akporo gị na PC gị
Anyị nwere Google Voice Access na Spanish